လီ​ဗာပူးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ​မျှော်​လင့်​ချက်​ဟာ ကစားသမား ၂ ဦး အ​ပေါ်မှာ အဓိက မူတည်​​နေတယ်​လို့ ဆိုလိုက်​တဲ့ အန်​ဖီး ကစားသမား​ဟောင်း - SPORTS MYANMAR
လီ​ဗာပူးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ​မျှော်​လင့်​ချက်​ဟာ ကစားသမား ၂ ဦး အ​ပေါ်မှာ အဓိက မူတည်​​နေတယ်​လို့ ဆိုလိုက်​တဲ့ အန်​ဖီး ကစားသမား​ဟောင်း
အန်​ဖီး ကစားသမား​ဟောင်း ဒွန်​ဟွတ်​ချင်​ဆင်​က ပထမဦးဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားအတွက်​ တိုက်​ပွဲဝင်​​နေရာမှာ ​ဗာဂျယ်​​ဗန်​ဒိုက်​ နဲ့ ​ရော်​ဘတ်​တိုဖာမီနို တို့ကို ဒဏ်​ရာ​ကြောင့်​ လုံးဝ လက်​လွှတ်​ လိုက်​ရလို့ မဖြစ်​ဘူးလို့ ဆိုလိုက်​ပါတယ်​။ လီ​ဗာပူးရဲ့ အဓိက ဖလားပြိုင်​ဘက်​ မန်​စီးတီး အသင်းက​တော့ ၎င်းတို့ရဲ့ အဓိင ကစားသမား ဖြစ်​သူ ​အေမရစ်​လာ​ပေါ့ဒ်​ကို ဒဏ်​ရာ​ကြောင့်​ ၅ လ ၆ လ ​​လောက်​ လက်​လွှတ်​ ထားရပါတယ်​။ ဟွတ်​ချင်​ဆင်​က ယာဂန်​က​လော့ ရဲ့ အသင်း အ​နေနဲ့ ဒီကစားသမား​တွေကို ဒဏ်​ရာ​ကြောင့်​ လက်​မလွှတ်​ရဖို့ အ​ရေးကြီးတယ်​လို့ ​ပြောလိုက်​ပါတယ်​။
ဟွတ်​ချင်​ဆင်​က “မန်​စီးတီး တို့ ဘာလုပ်​​နေသလဲ ဆိုတာ ခင်​​​ဗျားတို့ ကြည့်​လိုက်​ပါ ။ ပြီး​တော့ သူတို့မှာ ဂျွန်​စတုန်းနဲ့ လာ​ပေါ့ဒ်​တို့ ဒဏ်​ရာ ရ​နေပါတယ်​။ လီ​ဗာပူး က​တော့ ဒဏ်​ရာ ပြသနာ သိပ်​ပြီး ကြီးကြီးမားမား မရှိ​တော့ပါဘူး။ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ အယူအဆ ကို ​ပြောရမယ်​ ဆိုရင်​ လီ​ဗာပူး မှာ ​ဗာဂျယ်​​ဗန်​ဒိုက်​ နဲ့ ​ရော်​ဘတ်​တိုဖာမီနို တို့ ထုတ်​လိုက်​မယ်​ ဆိုရင်​..တိုက်​စစ်​က အလုပ်​သိပ်​ဖြစ်​မှာ မဟုတ်​သလို ခံစစ်​ပိုင်း ကလည်း အားနည်း သွားမှာပါ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
လီ​ဗာပူး ဟာ လက်​ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်​​ပေးဇယား မှာ​​တော့ ဒုတိယ​နေရာက မန်​စီးတီး အသင်းထက်​ ငါးမှတ် များ​နေပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ဟွတ်​ချင်​ဆင်​က​တော့ ဘယ်​အသင်း ​ရေပန်းစားဖို့ ​ရေပန်းစား သလဲ ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိ​သေးဘူးလို့ ဆိုလိုက်​ပါတယ်​။
ဟွတ်​ချင်​ဆင်​က “လီ​ဗာပူးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား အတွက်​ ​ရေပန်းစားသလား ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်​က ကျွန်​​တော့်​ကို ​မေးမြန်းမှု ရှိခဲ့ပါတယ်​။ အဲဒီအချိန်​ ကျွန်​​တော့်​ ​ခေါင်းထဲကို ဝင်​​ရောက်​ လာတဲ့ အ​တွေး​တွေ က​တော့..ဘယ်​နှစ်​မှတ်​ ရဖို့ လိုအပ်​သလဲ? ​ရေပန်းစားတဲ့ အသင်းလို့ သတ်​မှတ်​ ခံရဖို့အတွက်​ လီ​ဗာပူးတို့ ဘယ်​​လောက်​ ​ဝေး​ဝေး​ရောက်​ဖို့ လိုအပ်​သလဲ? ဆိုပြီး​တော့ပါ။ လက်​ရှိအချိန်မှာ​တော့ နံပါတ်​ ၅ ပါ။ လီ​ဗာပူးဟာ စီးတီးထက်​ ငါးမှတ် သာ​နေပါတယ်​။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လီ​ဗာပူး တို့ ၇ မှတ်​အသာ ရခဲ့​ပေမယ့်​ ရာသီကုန်​မှာ မန်​စီးတီး က တစ်​မှတ်​အသာနဲ့ ​ဗိုလ်​စွဲ သွားခဲ့ပါတယ်​။ အခုလည်း သူတို့ ​ရေပန်း မစား​နေပါဘူး။ ဒါ့​ကြောင့်​ လီ​ဗာပူး အ​နေနဲ့ လက်​ရှိ ပုံစံအတိုင်း ဆက်​သွားကာ ​ခြေမ​ချော်​သွားရန်​ အရမ်း လိုအပ်​ပါတယ်​။ သူတို့်ဟာ လက်​ရှိ ဥ​ရောပ ချန်​ပီယံပါ။ သူတို့်ဟာ ဒီလို ဝင့်​ကြွားစရာ ရှိ​နေတာ​ကြောင့်​ ဘယ်​အသင်းနဲ့ ​တွေ့​တွေ့ ယုံကြည်​မှု ပြည့်​ဝ ​နေမှာပါ။
လီ​ဗာပူး အ​နေနဲ့ လာမည့်​ ရက်​သတ္တပတ်​​တွေမှာ မန်​စီးတီး နဲ့ ရမှတ်​ ကွာဟမှုကို ၈ မှတ်​ ၁၀ မှတ်​ထိ တိုးနိုင်​မယ်​ ဆိုရင်​ လာမည့်​ နိုဝင်​ဘာလ မန်​စီးတီး နဲ့ အန်​ဖီးမှာ ကစားရတဲ့အခါ ဒါဟာ အရမ်းကို အ​ရေးကြီးတဲ့ ပွဲစဉ်​ ဖြစ်​လာမှာပါ။ ဘာလို့်လဲဆို​တော့ ဒီအချိန်​ လီ​ဗာပူး ရဲ့ ကစားပုံကို ကြည့်​လိုက်​ရာမှာ `ဘယ်​သူမှ သူတို့ကို ဒီအချိန်​မှာ အနိုင်​မယူ နိုင်​​လောက်​ဘူး။ သူတို့ဟာ အရမ်း သန်​မာလွန်းတယ်​´ လို့ ​တွေးမိပါတယ်​။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
လီ​ဗာပူး ဟာ ယ​နေ့ည မှာ​တော့ ပရီးမီးယားလိဂ် တန်းတက်​ ရှက်​ဖီးယူနိုက်​တက်​ ကို အ​ဝေးကွင်းမှာ သွား​ရောက်​ ကစားရမှာ ဖြစ်​ပြီး မန်​စီးတီး က​တော့ ဂွတ်​ဒီဆင်​ပက်​မှာ အဲ​ဗာတန်​ ကို ပွဲကျပ်​ သွားကစား ရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
လီ​ဗာပူးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ​မြှျော​လငျ့​ခကျြ​ဟာ ကစားသမား ၂ ဦး အ​ပျေါမှာ အဓိက မူတညျ​​နတေယျ​လို့ ဆိုလိုကျ​တဲ့ အနျ​ဖီး ကစားသမား​ဟောငျး
အနျ​ဖီး ကစားသမား​ဟောငျး ဒှနျ​ဟှတျ​ခငျြ​ဆငျ​က ပထမဦးဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားအတှကျ​ တိုကျ​ပှဲဝငျ​​နရောမှာ ​ဗာဂယျြ​​ဗနျ​ဒိုကျ​ နဲ့ ​ရျော​ဘတျ​တိုဖာမီနို တို့ကို ဒဏျ​ရာ​ကွောငျ့​ လုံးဝ လကျ​လှတျ​ လိုကျ​ရလို့ မဖွဈ​ဘူးလို့ ဆိုလိုကျ​ပါတယျ​။ လီ​ဗာပူးရဲ့ အဓိက ဖလားပွိုငျ​ဘကျ​ မနျ​စီးတီး အသငျးက​တော့ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ အဓိင ကစားသမား ဖွဈ​သူ ​အမေရဈ​လာ​ပေါ့ဒျ​ကို ဒဏျ​ရာ​ကွောငျ့​ ၅ လ ၆ လ ​​လောကျ​ လကျ​လှတျ​ ထားရပါတယျ​။ ဟှတျ​ခငျြ​ဆငျ​က ယာဂနျ​က​လော့ ရဲ့ အသငျး အ​နနေဲ့ ဒီကစားသမား​တှကေို ဒဏျ​ရာ​ကွောငျ့​ လကျ​မလှတျ​ရဖို့ အ​ရေးကွီးတယျ​လို့ ​ပွောလိုကျ​ပါတယျ​။
ဟှတျ​ခငျြ​ဆငျ​က “မနျ​စီးတီး တို့ ဘာလုပျ​​နသေလဲ ဆိုတာ ခငျ​​​ဗြားတို့ ကွညျ့​လိုကျ​ပါ ။ ပွီး​တော့ သူတို့မှာ ဂြှနျ​စတုနျးနဲ့ လာ​ပေါ့ဒျ​တို့ ဒဏျ​ရာ ရ​နပေါတယျ​။ လီ​ဗာပူး က​တော့ ဒဏျ​ရာ ပွသနာ သိပျ​ပွီး ကွီးကွီးမားမား မရှိ​တော့ပါဘူး။ ကြှနျ​​တျော့​ရဲ့ အယူအဆ ကို ​ပွောရမယျ​ ဆိုရငျ​ လီ​ဗာပူး မှာ ​ဗာဂယျြ​​ဗနျ​ဒိုကျ​ နဲ့ ​ရျော​ဘတျ​တိုဖာမီနို တို့ ထုတျ​လိုကျ​မယျ​ ဆိုရငျ​..တိုကျ​စဈ​က အလုပျ​သိပျ​ဖွဈ​မှာ မဟုတျ​သလို ခံစဈ​ပိုငျး ကလညျး အားနညျး သှားမှာပါ။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။
လီ​ဗာပူး ဟာ လကျ​ရှိ ပရီးမီးယားလိဂျ အမှတျ​​ပေးဇယား မှာ​​တော့ ဒုတိယ​နရောက မနျ​စီးတီး အသငျးထကျ​ ငါးမှတျ မြား​နပေါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​လညျး ဟှတျ​ခငျြ​ဆငျ​က​တော့ ဘယျ​အသငျး ​ရပေနျးစားဖို့ ​ရပေနျးစား သလဲ ဆိုတာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မရှိ​သေးဘူးလို့ ဆိုလိုကျ​ပါတယျ​။
ဟှတျ​ခငျြ​ဆငျ​က “လီ​ဗာပူးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား အတှကျ​ ​ရပေနျးစားသလား ဆိုပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျ​က ကြှနျ​​တျော့​ကို ​မေးမွနျးမှု ရှိခဲ့ပါတယျ​။ အဲဒီအခြိနျ​ ကြှနျ​​တျော့​ ​ခေါငျးထဲကို ဝငျ​​ရောကျ​ လာတဲ့ အ​တှေး​တှေ က​တော့..ဘယျ​နှဈ​မှတျ​ ရဖို့ လိုအပျ​သလဲ? ​ရပေနျးစားတဲ့ အသငျးလို့ သတျ​မှတျ​ ခံရဖို့အတှကျ​ လီ​ဗာပူးတို့ ဘယျ​​လောကျ​ ​ဝေး​ဝေး​ရောကျ​ဖို့ လိုအပျ​သလဲ? ဆိုပွီး​တော့ပါ။ လကျ​ရှိအခြိနျမှာ​တော့ နံပါတျ​ ၅ ပါ။ လီ​ဗာပူးဟာ စီးတီးထကျ​ ငါးမှတျ သာ​နပေါတယျ​။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လီ​ဗာပူး တို့ ရ မှတျ​အသာ ရခဲ့​ပမေယျ့​ ရာသီကုနျ​မှာ မနျ​စီးတီး က တဈ​မှတျ​အသာနဲ့ ​ဗိုလျ​စှဲ သှားခဲ့ပါတယျ​။ အခုလညျး သူတို့ ​ရပေနျး မစား​နပေါဘူး။ ဒါ့​ကွောငျ့​ လီ​ဗာပူး အ​နနေဲ့ လကျ​ရှိ ပုံစံအတိုငျး ဆကျ​သှားကာ ​ခွမေ​ခြျော​သှားရနျ​ အရမျး လိုအပျ​ပါတယျ​။ သူတိျု့ဟာ လကျ​ရှိ ဥ​ရောပ ခနျြ​ပီယံပါ။ သူတိျု့ဟာ ဒီလို ဝငျ့​ကွှားစရာ ရှိ​နတော​ကွောငျ့​ ဘယျ​အသငျးနဲ့ ​တှေ့​တှေ့ ယုံကွညျ​မှု ပွညျ့​ဝ ​နမှောပါ။
လီ​ဗာပူး အ​နနေဲ့ လာမညျ့​ ရကျ​သတ်တပတျ​​တှမှော မနျ​စီးတီး နဲ့ ရမှတျ​ ကှာဟမှုကို ၈ မှတျ​ ၁၀ မှတျ​ထိ တိုးနိုငျ​မယျ​ ဆိုရငျ​ လာမညျ့​ နိုဝငျ​ဘာလ မနျ​စီးတီး နဲ့ အနျ​ဖီးမှာ ကစားရတဲ့အခါ ဒါဟာ အရမျးကို အ​ရေးကွီးတဲ့ ပှဲစဉျ​ ဖွဈ​လာမှာပါ။ ဘာလိျု့လဲဆို​တော့ ဒီအခြိနျ​ လီ​ဗာပူး ရဲ့ ကစားပုံကို ကွညျ့​လိုကျ​ရာမှာ `ဘယျ​သူမှ သူတို့ကို ဒီအခြိနျ​မှာ အနိုငျ​မယူ နိုငျ​​လောကျ​ဘူး။ သူတို့ဟာ အရမျး သနျ​မာလှနျးတယျ​´ လို့ ​တှေးမိပါတယျ​။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။
လီ​ဗာပူး ဟာ ယ​နညေ့ မှာ​တော့ ပရီးမီးယားလိဂျ တနျးတကျ​ ရှကျ​ဖီးယူနိုကျ​တကျ​ ကို အ​ဝေးကှငျးမှာ သှား​ရောကျ​ ကစားရမှာ ဖွဈ​ပွီး မနျ​စီးတီး က​တော့ ဂှတျ​ဒီဆငျ​ပကျ​မှာ အဲ​ဗာတနျ​ ကို ပှဲကပျြ​ သှားကစား ရမှာ ဖွဈ​ပါတယျ​။